Reddit ndeimwe yemapuratifomu akawandisa enhau anoshandiswa kugovana zvinongedzo neruzivo. Inoita vashandisi kukwidza or downvote chero zvemukati zvakatumirwa nevamwe vashandisi. Reddit maficha 'Karma'poindi kuitira kuti vadzivirire ma spammers kubva pakutumira zvinongedzo zvisina mutsindo. Iko kune muganho wekutumira zvinongedzo pane ino saiti, saka kana iwe uri spammer uye uchitsvaga imwe chikuva kukopa-namatidza zvinongedzo zvako zvisina kurongeka, Reddit haisi yako. Iyo puratifomu yakanyatso kuomarara kune ma spammers uye haitore nguva kudzima zvemukati zve spam. Mushandisi anowana 'Karma' mapoinzi kana mumwe munhu akataura pane yavo link kana kuisimudzira.
Nepo iri inozivikanwa kwazvo pasocial nhau mapuratifomu, vanhu vachiri kutadza kuwana zvakanakisa mairi. Mune ino posvo, isu tichadzidza nezve zvimwe zvinonakidza uye zvinobatsira Reddit matipi uye manomano izvo zvinokubatsira iwe kuti uite zvakanakisa mairi.
Reddit matipi uye manomano
1. Subreddits yakakosha kwazvo
Kana iwe uri mutsva kuReddit, yeuka kuti maSredredits pano akakosha kwazvo. Subreddits ndiwo chaiwo mapoka akagadzirwa kuronga zvemukati zvakagovaniswa nemamirioni evashandisi. Imwe neimwe Subreddit yakatsaurirwa kune imwe nhaurwa senge dzidziso, makomputa, Windows, uye hutano nezvimwe.Pese paunotumira chinongedzo, unofanirwa kusarudza yakakodzera Subreddit inoenderana neyako link niche Kune zviuru zvema Subreddits pano uye zvakakosha kuti usarudze akanakisa chikamu kuitira kuti uwane akawanda eanotariswa vaoni uye vaverengi kuti vabatanidzwe nezvako zvinyorwa.
Gadzira slideshow yemifananidzo muReddit
Kana iwe uchida kuona iyo mifananidzo pane chero yakatarwa Subreddit, iwe unogona kungogadzira inokurumidza slideshow. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuenda yako yaunoda Subreddit peji uye tweak iyo URL zvishoma. Wedzera tsamba 'p' mushure meReddit muURL uye iwe unogona kutarisa inokurumidza slideshow yemifananidzo yeiyo chaiyo Subreddit. Semuenzaniso, iwe unoda kutarisa iyo mifananidzo yemaruva, iyo URL yeakasarudzwa Subreddit ichave https://www.reddit.com/r/flower/, ikozvino wedzera tsamba 'p' uye uite https://www.redditp.com/r/flower/ uye iwe unotarisa yakanaka Slideshow yemaruva ese mifananidzo yakatumirwa paReddit nevashandisi vakasiyana.
3. Gadzira & shandisa MultiReddits
Unogona kukirabhu ma Subreddits akafanana uye gadzira MultiReddit uye wobva wawedzera ma SubReddits mairi kuitira kuti zvidzivirire zvinodzokororwa zvinyorwa uye Subreddits. Kuti ugadzire MultiReddit, pinda muakaunti yako yeReddit uye enda kuruboshwe kuruboshwe rwezvirongwa, tinya sika uye tevera mirairo. Paunenge uchigadzira MutliReddit, ita shuwa kuti iwe unoipa iro zita rakakodzera zvinoenderana nemhando yacho.
4. Reddit kupindura matipi
Makomendi anoita basa rakakura mukuwana Karma Points muReddit. Kunyange zvakadaro, zvakakosha kuti utaure pfungwa, kuwedzera mamwe mhedzisiro sekutsemuka kwemutsara, kushinga / iticic kana kurovera kunogona kuita kuti kutaura kwako kuonekwe.
Kuti uratidze kuputsika kwemutsara mumashoko ako kana kutanga ndima itsva, isa nzvimbo mbiri kumagumo kwetambo.
Kugadzira izwi rakashinga, nyora pakati pesterisks mbiri ** izwi ** uye kuti italicize yako mhando yerudzi pakati penyeredzi imwe se *izwi* uye nyora iyo ~~izwi~~ yekurovera.
Shandisa Unicode mavara ekuwedzera mamoni mune ako Reddit makomendi. Manzwiro anoita kuti zvirevo zvako zvinyatso kuratidza, se (? _?) Emoticon inoratidza kuratidza kwako kusatendera.
5. Bhatani Random
6. Reddit Nhare Yenhare
Iwe unoziva here kuti Reddit ine yayo mobile vhezheni yakanyatsogadzirirwa mafoni ako? Kuti utarise Reddit mune yayo nharembozha vhezheni, iwe unongofanirwa kuwedzera 'i ' pane yakakosha URL, kureva. i.reddit.com.
7. Zarura maSredredits
Iwe unogona kazhinji kusangana nemamwe akavharirwa SubReddits munzvimbo yako yebasa, asi usazvidya moyo iwe unogona kuvabvisa chero nguva. Unogona kuvabvisa kana nekushandisa HTTPS kana nekuwedzera '+'chiratidzo pamagumo ezita rakavharwa reSredredit kureva, www.reddit.com/r/food+.
8. Wedzera maKarma Points ako
Izvi zvinoshanda zvishoma asi zvinoita. Iwe unogona kuwedzera ako Karma mapoinzi nekutumira akakodzera makomendi pane akakurumbira subreddits. Izvo hazvina kukosha kutumira chirevo chakareba, chipfupi asi chakakodzera chinokubatsira iwe kuwedzera ako Karma mapoinzi echokwadi.
Kupindura inowanzo bvunzwa mibvunzo zvakare kuchakubatsira iwe kuwana yakawanda yakanaka Karma mapoinzi. Ita shuwa kuti mhinduro yako inosekesa asi inoshanda. 'Mamwe mavhoti ' yakaenzana nemamwe mapoinzi eKarma. Kutumira dzimwe nyaya dzinosetsa uye dzakajeka mumhinduro zvakare kunobatsira kuwana kutarisisa kwakawanda, kuchiteverwa nemavhoti uye pakupedzisira iwo maKarma poindi
9. Shandisa mapfupi neReddit Enhancement Suite
Mapfupi ekhibhodi (mapfupi) chengetedza nguva uye wedzera kugadzirwa. Reddit keyboard mapfupi achakupa iwe chiitiko chiri nani. Kuti ushandise aya mapfupi unotanga waisa iyo Reddit Enhancement Suite.
Pazasi pane iyo runyorwa rwekupfupisa iwe kwaunowana neSuite-
Z = Kuderera pasi.
A = Kukwidziridza.
J = Inotevera
H = Viga
U = Mushandisi
S = Sevha
F = Zorodza
Ini = Inbox
R = Enda kune yakatarwa subreddit
C = Vhura posvo
X = Vhura preview
L = Vhura mune nyowani tebhu
Iyo Reddit Enhancement Suite zvakare inoita kuti iwe ugadzirise mushandisi interface uye inoita kuti iwe utarise mavhidhiyo kubva chaiko peji rekutanga kana kuti uwedzere mifananidzo.
10. Gadzira Akaundi Akawanda muReddit
Kana iwe uri kushandisa Reddit yako kushambadzira yedhijitari, kugadzira inopfuura imwe account kunobatsira. Gadzira account yako wega, maakaunzi maviri ekutengesa uye chengeta imwe kana mbiri maakaunzi ekuchengetedza. Zviri nyore kwazvo uye nekukurumidza kugadzira iyo Reddit account. Rangarira kushandisa ako mashoma mwedzi maakaunzi maakaundi ekushambadzira.
Ndinovimba aya matipi anokubatsira iwe kuwana zvakanakisa kubva kuReddit. Windows 10 vashandisi vangangoda kutarisa izvi Reddit maapplication.
Toxic links uye disavows: Iyo yakazara SEO gwara
Gadzirisa GNOME Desktop neTehu Aya muBuntu 17.10
Filed Under: Subreddits